Welcome to baidoanews.com | Xildhibaan Gariish Iyo Kartida Adeegyadiisa Waa Isbaaro Dhiig Miirarasho Ah!
Xildhibaan Gariish Iyo Kartida Adeegyadiisa Waa Isbaaro Dhiig Miirarasho Ah!
Monday August 28, 2017 - 13:01:07 in Diirada Baidoanews by BANA Mogdishu Office
Sida looga mid noqdo xubnaha baarlamaanka federaalka iyo kuwa maamul beeleedyada waxay tahay iyadoo ay si fudud usoo galaan burcadda shirkaddaha iyo kuwa adeegyada duulimaadyada. burburkii Somalia kadib xaalada Somalia waxay isku badashay waji kale.
Sida looga mid noqdo xubnaha baarlamaanka federaalka iyo kuwa maamul beeleedyada waxay tahay iyadoo ay si fudud usoo galaan burcadda shirkaddaha iyo kuwa adeegyada duulimaadyada. burburkii Somalia kadib xaalada Somalia waxay isku badashay waji kale. Maamulkii dalka, hantidii qaranka iyo qeybihii kale aasaaska u ah adeegyada mujmataca waxaa gacanta ku dhigay qurba joog iyo burcad usoo tafaxeydatay inay horseedaan xaalad dhiigya cabnimo ah.
Shirkaddaha diyaaraddaha iyo duulimaadyada caalamiga ah ayaa ka mid ah meelaha sida xun looga arki karo adeegyada ay hayaan, waxaa ka muuqata gaboodfalyo aan weli laga hadlin laakiin xannuun badan ku haaya dadka baahida ka haysa inay helaan adeegyo hufan.
Xujeyda, ganacsatada yaryar iyo mujtamaca dhoofayaasha ah ayaa noqdeen dhibanayaal si xun loo dhiig miirto. Ma haystaan dowlad cod u ah iyo siyaasad u adeegeysa danaha qaranka.
Dowladda dhexe waxay ku nooshahay canshuurta kasoo go’da mujtamacaas haddana waxay yihiin kuwo la ilooway ee dulman.
Gefanayaasha adeegyadaas mas’uulka ka ah waxay haystaan xasaanad siyaasi ah iyo xubinimo baarlamaan iyo awoodo kale ee dowladeed si ay uga megan-galaan la xisaabtanka sharciga.
Mas’uulkaas oo kale, hadduu magac shirkadeed iyo adeegyo kale ku dhiig miirto dadweynaha u baahan, ma jiro garsoor ama caddaalad la xisaabtami kara.
Waxaa si xadhaaf ah cirka isku shareeray qiimaha tikadhada ee dhoofayaasha isticmaalaan dalka gudahiisa iyo dibadiisaba. Tusaale qiimaha tikidhka sii socod iyo soo noqod Dubai waa 750 Dollar, sidoo kale, qiimaha tikidhka iyo adeegyada Xajka waa lacag ku dhow 4.000 dollar qofkiiba.
Qiimayaashaas ma ahan kuwii dhabta ahaa ee waa isbaaro la hoos geliyay magac baahi adeeg ee lagama maatmaan ah. Nasiib-darada Soomaalida haysata ma haystaan maamul caddaalad ah ee danaha shacbiga u hiiliya, iyagana kama hadlaan.
Marka xaalada lagu nool yahay ayaa ah mid ay u sugnaatay aamusnaan iyo in la ogolaado in lagu hoos noolaado awood dhiig miirasho ah oo aan rajo iyo badbaado midna laheyn.
Shirkadda Jubba Airways iyo maamulaheeda Saciid Nuur Gariish wuxuu ka mid yahay gabood falayaasha ugu waaweyn ee adeegsada awooda dhiig miirashada. danahiisa qaaska ah ayaa uga kheyr badan mida shacbiga iyo sharciga.
Wuxuu xubin ka yahay golaha shacbiga, sababta uu u galayna waxay la xiriirtaa inuu helo xasaanad siyaasadeed iyo awood dowladeed ee lama taabtaan ah, danahiisa gaarkana noqdaan xaalad aan laga hadli karin.
Shirkaddaas waxay isticmaashaa qofkii ka dhaqdhaqaaqa adeegyadeeda guracan in ay qaarijiso. Somalia waxaa ku badan shirkaddo noocaas ah iyo Gariish-yo kale oo badan, waxayna turaanturo ku yihiin inay Somalia madaxa lasoo kacdo, lana helo nidaam ku dhisan caddaalad, damaanad qaadna u ah danaha dadka iyo dalka.
Golaha aqalka sare oo hadda lasoo kacay baraarug arrintaasi la xiriirta ayaa waxaa lasoo warinayaa in xildhibaanada qaarkood soo gaarayaan laaluush iyo haddiyado kale ay ka helayaan Jubba Airways iyo Saciid Nuur Gariish qof ahaantiisa, taasoo micnaheedu yahay inaan laga hadlin xaaladihiisa adeegyada ah.
Xildhibaanada qaarkood ayaaba lafahooda la cabsaday, qaarkoodna waxaa lasoo warinayaa inay fadhiyada ka qeyb gelin si ay ugu amaan helaan shirkadda dooxadada ah.
Haddii aan Somalia loo helin nidaam iyo garsoor caddaalad ku filan aan dadkeedu siinin qaranka Soomaaliyeed wuxuu ku danbeynayaa inuu la noolaado cudurka Gariish oo la mid ah Feyruska HIV ee aan daawada laheyn.
W/qoray Ali Muhiaddin